गुगल एनालिटिक्सबाट बट्सहरू बाहेक - Semalt विशेषज्ञ द्वारा व्याख्या गरिएको
गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टहरूमा रेफरल स्प्याम राख्ने विचारमा नयाँ व्यक्तिहरूका लागि Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक माइकल ब्राउनले त्यस्तै एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ।
ilovevitality.com एक डोमेन हो जुन केहि कम्पनीको ट्राफिक रिपोर्टमा देखा पर्दछ। यदि रिपोर्टमा यो डोमेन नाम देखा पर्दछ र यदि यसबाट धेरै यातायात आएको ख्याल राख्दछ भने सावधान रहनुहोस् किनकि यो साइटमा भ्रमण गर्ने वास्तविक व्यक्तिहरू होइनन्।
ilovevitality.com एक अटोबुट वा क्रलिंग बटको काम हो जसको प्राथमिक उद्देश्य भनेको अधिक ट्राफिकको साथ साइटलाई लक्षित गर्नु हो, मालिकको जिज्ञासामाथि विजय हासिल गर्नको लागि यसमा के अद्वितीय छ भनेर हेर्न पर्याप्त छ। अन्तमा, मेनिपुलेटिभ स्वचालित बोटको पछाडि व्यक्तिले आफ्नो साइटको लागि ट्राफिक प्राप्त गर्न समाप्त गर्दछ। यहाँ समस्या यो छ कि वेबसाइट मालिकको पक्षका लागि, बट्सले उनीहरूको साइटहरूको लागि ट्राफिक डाटाको शुद्धता र विश्वसनीयता नष्ट गर्न सक्छ। तसर्थ, यो आवश्यक छ कि उनीहरूले सकारात्मक एक्शन लिनेछन् Google विश्लेषणबाट यी बट्सलाई मुक्त गर्न वा फिल्टर गर्न।
गुगल विश्लेषक रिपोर्टहरूबाट ilovevitality बोटबाट छुटकारा पाउनको लागि त्यहाँ तरिकाहरू छन्। साथै, व्यक्तिहरूले जैविक ट्राफिकबाट कसरी एक बोट पहिचान गर्न सिक्नु पर्छ। तर पहिले यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि किन यी सबै कार्यहरू गर्नुपर्दछ र बटहरू रोक्नुहोस्:
किन ब्लक बट्स
बट्स धेरै कष्टप्रद छन् यदि एकसँग धेरै फरक व्यक्तिहरूको साथ रन-इन्स छ भने। तिनीहरू गुगल एनालाइटिक्स रिपोर्टमा देखा पर्दा स्थिति झनै नराम्रो हुँदै जान्छ किनकि यसले स्वतः सबै डाटालाई गलत बनाउँछ र मार्केटिंग अभियान कार्यान्वयन गर्न प्रयोग योग्य हुँदैन। उदाहरण को लागी, सबै रूपान्तरण दरहरु र गोल प्रतिस्पर्धा डाटा रिपोर्ट गलत हुन जान्छ। ग्राफमा चित्रित डाटा सही देखि टाढा छ। कहिलेकाँही, एकले सोच्न सक्छ कि वेबसाइटले खराब प्रदर्शन गर्दछ, तर वास्तवमा, सोचेभन्दा राम्रो गर्दछ। यसको मतलव बोट ट्राफिकले साइटको प्रदर्शनको बारेमा सबै धारणाहरू नष्ट गर्न सक्छ।
ilovevitality.com वेबसाइटहरूलाई लक्षित गर्नको लागि विकसित गरिएको नयाँ ट्राफिक बोट हो। एक दिनमा धेरै साइटहरूलाई असर गर्ने सम्भाव्यता छ। विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि यसको लक्ष्य कुञ्जी शब्दहरूमा मालिकहरू बेच्नु हो। उपकरणहरू जुन ilovevitality प्रयोग गर्दछ कम गुणवत्ताको हो र वेबसाइटमा भयानक प्रभाव पार्दछ। यदि साइट ilovevitality.com बाट धेरै यातायात प्राप्त गर्दछ, मालिकले बिर्सनु हुँदैन कि तिनीहरूले ती बट्सहरूले प्रयोग गर्ने संसाधनहरूको लागि भुक्तान गरे। ilovevitality एक वेबसाइट को होस्टिंग मा निर्भर गर्दछ जसको मतलब हो कि वेबसाइट संसाधनहरु को उपयोग गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्छ कि तिनीहरू अन्य उत्पादन गतिविधिहरु को लागी प्रयोग गर्न सक्छ। यो वर्तमान मा धेरै वेबमास्टर्स को अस्तित्व को एक धेरै आधार को रूप मा कार्य गर्दछ।
वेबसाइट पहुँच गर्न बाट रोकिदै
यस बारेमा जाने कुनै तरिका छैन होस्ट फाईलहरूको माध्यमबाट। एकले .htaccess फाइलमा कोड थप्न सक्छ यो निश्चित गर्न यसले बोटलाई रोक्दछ। यद्यपि होस्ट फाईलहरूसँग गडबड गर्न यो धेरै जोखिमपूर्ण छ। वैकल्पिक डाटाबाट छुटकारा पाउनको लागि हो।
रोकिने बटहरूमा वैकल्पिक
निम्नलिखित गुगल एनालिटिक्स स्तरमा प्रयोगको रणनीति हो:
१. खोल्नुहोस् GA र प्रशासन ट्याबमा जानुहोस्।
२. एउटा उपयुक्त खाता छनौट गरेर सुनिश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ एउटा अनफिल्टर्ड डाटाको साथ छ।
Fil. फिल्टरहरू छान्नुहोस् र नयाँ फिल्टर थप गर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।
Filter. बाह्य फिल्टर सेट गर्नुहोस् र रेफरल ट्राफिक चयन गर्नुहोस्। नुकसानको कारण बोटको सहि नाम इनपुट गर्नुहोस्।
The. सेटिंग्स बचत गर्नुहोस्।
Still. जबकि उही दृश्यमा अझै पनि, GA रिपोर्टहरूमा ग्राफको मुनि तीरमा क्लिक गर्नुहोस्।
The. तपाईले परिवर्तन गर्नुभएको डाटाको एनोटेसन सिर्जना गर्नुहोस्।